Mashandisiro Aita Mobile Mapurogiramu Akachinja Nyika | Martech Zone
Chitatu, September 4, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Takanyora nezve mafoni ekushandisa uye nei akasiyana. Kusiyana nedesktop inopa akawanda-tasking, nharembozha application inowanzo kuve nekutarisisa kwakazara kwemushandisi wayo. Mafoni efoni anopa akasiyana akasiyana mushandisi ruzivo zvakare. Zviuru zvevashandisi vatora pasi uye vari kuita neApp yedu pane iPhone uye Droid uye ma stats akasiyana zvakanyanya kana zvasvika pabasa ravo.
Kune avhareji kambani, kuvaka application kwanga kusiri sarudzo mune yakapfuura - kuchidhura makumi ezviuru zvemadhora. Nekudaro, mapuratifomu eapp akachinja uye zvakanyanya uye mitengo yakadzika. Iko hakuna kudikanwa kwekutora application yakarongedzwa kubva pakutanga zvekare. Ivo vanhu vakavaka yedu application, Postano, Iva neshure-kumagumo iyo inogona kugadzirisa chero chero zvemukati manejimendi manejimendi uye yekumberi-kumagumo iyo inogona kuve yakagadziridzwa zvakanaka kune zvaunoda. Ivo vanoita basa rinoshamisa - uye kwavo kuunganidzwa kwemapuratifomu uye matekinoroji anotangira pane nharembozha kune chaiwo-nguva ekuona ekuratidzira ayo anogona kufukidza madziro ese. Kutonhora vanhu!
ichi infographic kubva Kumusoro Mapurogiramu inopa huwandu hwepasirese pane kugoverwa kwekushandisa uye kushandiswa. Usaverenge kuverenga yako yekushandisa nhare kana kushambadzira pane imwe. Iwo mapuratifomu akakosha ekudyidzana netarisiro yako!
Iwo Masimba Makuru Ekutungamira Ekukora
Kutenda neiyi inobatsira infographic. Aya manhamba ari kuratidza zvakajeka mafambiro azvino kana zvasvika pakugoverwa kwekushandisa uye kushandiswa, nokudaro zvakakosha kumakambani anofarira kuwedzera kwavo simba papuratifomu. Ini ndakashamisika kuona akawanda mameseji ekunyorera aine vakawanda vashandisi kupfuura Skype.